Ciyaaraha – Page 40 – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Kooxaha Horyaalka Ingiriiska oo Wada Xiiseenaya Xidiga Roma Kostas Manolas
Kooxda arsenal ayaa shaaciysay in uu bartilmaameedkeeda kowaad yahay xili ciyaareedka dambe daafaca kooxda Roma Kostas Manolas. Daafaca dhexe ee kooxda Roma ayaa bartilmaameed waxaa xili ciyaareedkaan ka dhiganayay kooxda Horyaalka dalka ingiriiska ka ciyaara sida Chelsea, Everton iyo Manchester United, kadib bandhigiisa horyaalka dalka Talyaaniga. Macalinka kooxda arsenal Arsene Wenger ayaa dhankiisa sheegay in xidiga heerka caalami ee xulka dalka ...
Mauricio Pochettino oo Heshiis Cusub u Saxiixaya kooxda Totenham
Macalinka kooxda Totenham Mauricio Pochettino ayaa sheegay in uu diyaar u yahay heshiis cusub uu kusii joogayo kooxda Tan iyo sanadka 2021-ka. Ninka reer argentine oo qabtay kooxda Totenham xili ciyaareedkii 2014-kii ayaa mudooyinkii ugu dambeeyay lala xiriirinaayay kooxda dalka Faransiiska ka ciyaarta ee Paris Saint-Germain. Macalinka Mauricio Pochettino ayaa is badal weyn ku sameeyay kooxda Magaalada London ka dhisan ...
Pierre-Emerick Aubameyang oo Mustaqbalkiisa Ka Hadlay
Weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang ayaa sheegay in riyadiisa ay tahay ka ciyaarista Horyaalada Spain iyo Ingiriiska midkood. 26-jirka heerka caalami ee xulka dalka Gabon ayaa mudooyinkii dambe lala xiriirinaayay kooxaha Spain iyo ingiriiska kadib markii uu xili ciyaareedkaan kooxdiisa u dhaliyay 34 goal dhamaaan tartamada oo dhan kaliyaha Robert Lewandowski ayaa kusoo xiga. “Riyadeeda waxa ay tahay in ...
Gareth Bale : Waxaan Jeclaan Lahaa in Real Madrid iyo Totenham ay isku Arkaan Champions League
Xidiga kooxda Real Madrid Gareth Bale ayaa sheegay in uu aad u jeclaan lahaa hadii ay group Stage-ka ay kuwada kulmaan kooxdiisa hore ee Totenham xili Ciyaareedka soo socda.. Laacibka heerka caalami ee xulka dalka Wales ayaa ka dhaqaaqay kooxda Totenham ee Magaalada London ka dhisan isagoona ku biiray kooxda Real Madrid sanadkii 2013-kii, Madrid ayaa ku iibsatay xidigaan aduun ...
Dele Alli oo Seddex Kulan la Ganaaxayo
Ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda totenham Dele Alli ayaa u muuqda mid wajahaayo Ganaax 3-kulan ah kadib markii uu qaladaad sameeyay kulankii ay xalay barbaraha la galeen kooxda West Brom. Dele Alli ayaa markii dib loo daawaday ciyaarta lagu arkay isagoo waxyaabo aan wanaagsaneen kula dhaqaaqaya xidiga qadka dhexe ee kooxda West Brom. Claudio Yacob. Xidiga heerka caalami ee xulka ...
Dhgeystayaal kusoo dhawaada Barnaamijka Ciyaaraha Radio Simba ee Magaalada Muqdisho waana Duhurnimo Talaado ah Tariikdana ay ku beegan Tahay 26-4-2016 ciyaaraha simba26-4-2016
War Deg Deg:- Cristiano Ronaldo iyo Karim Benzema oo Ciyaara kulanka Manchester City
War kasoo baxay goordhaweyd naadiga Real Madrid ayaa lagu sheegay in xidigaha Cristiano Ronaldo iyo Karim Benzema ay ciyaari doonaan kulanka Real Madrid ay ka hortagayso habeen dambe kooxda Manchester City. “iyaga 100% way caafimaad qabaan ayuu wariyaasha u sheegay macalin Zinedine Zidane. Meel walba waa laga tijaabiyay way caafimaad qabaan, wayna dheeli doonaan,.
David Trezeguet oo Hambalyo u Direy kooxda Juventus
Weeraryahankii Hore ee xulka dalka France David Trezeguet ayaa la dhacsan qaab ciyaareedka kooxdiisa Hore xili ay galabta ku guuleysatay horyaalka dalka Talyaaniga markii 5-aad oo xiriir ah. Trezeguet ayaa Juventus ku guuleystay Horyaalka dalka Talyaaniga sanadihii 2001-02 iyo 2002-03 xili toban sano uu ku sugnaa Magaalada Turin ee dalka talyaaniga ka hor inta uusan kooxda ka dhaqaaqin. Juventus ayaa ...
Leonardo Bonucci:- Juventus Waa kooxda ugu Awooda Badan Horyaalka Talyaaniga
Daafaca kooxda Juventus Leonardo Bonucci ayaa ka hadlay bandhiga Kooxda Juventus iyo qaabka ay sanadkaan ugu guuleysatay koobkii 5-aad ee Horyaalka dalka talyaaniga. Kadib markii ay kooxda Napoli guuldaro kala kulantay kooxda Roma, Juventus ayaa usii dabaal-dagtay ku guuleysiga Horyalka dalka talyaaniga xili ay kulamo ay kasii dhiman yihiin Horyaalka. Kooxda uu Hogaamiyo Macalin Massimiliano Allegri’s ayaa 10-kulan ee horeeyay ...
Dhgeystayaal kusoo dhawaada Barnaamijka Ciyaaraha Radio Simba ee Magaalada Muqdisho waana Duhurnimo isniin ah Tariikdana ay ku beegan Tahay 25-4-2016 cayaaraha duhur 25-4-2016